Tani waa doorasho tafaariiq ah – FIQI | KEYDMEDIA ENGLISH
Tani waa doorasho tafaariiq ah – FIQI
Fiqi, oo ku dhawaad labo sano ka mushquulay siyaasadda heer Federaal, ayaa hannaanka gaabiska ah ee doorashooyinka ku tilmaamay muddo kororsi dadban.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirkii hore ee Amniga Galmudug, Axmed Macallin Fiqi, ayaa Guddiyada doorashooyinka labada heerba ku eedeeyay in ay yihiin kaliya marqaati furayaal aan lahayn wax awood ah, isla-markaana u taagan yihiin xalaaleynta kuraasta la boobo.
Fiqi, Wuxuu hannaanka luudiska ah ee doorashooyinku ku billawdeen ku macneeyay [Tafaariiq] wuxuuna xusay in aysan jirin cid taqaan xilliga ay billaabaneyso iyo waqtiga ay idlaaneyso, halka uu carrabka ku dhuftay in Musharixiintu, muddo kordhin u fahmeen sida wax loo wado.
“Midowga Musharixiintu waa fahmeen xeeladda cusub ee doorashada lagu wado, waxayna u garteen muddo kororsi dadban doorashada tafaariiqda ah ee aan lahayn waqti ay bilaabanayso iyo mid ay dhamaanayso”. Ayuu yiri Xildhibaan Fiqi.
Fiqi, oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri; “Doorashadii 2016 guddiyada ayaa awood lahaa, balse middaan guddiyadu waa marqaati furayaal”.
Keydmedia Online, ayaa fahansan in inta badan xubnaha guddiyada doorashooyinka uu gacantiisa ku qoray eedeysae Fahad Yaasiin, isla-markaana daqaalo ka yimid Madaxtooyada la adeegsaday si Maxamed Xasan Cirro, looga dhigo Guddoomiyaha Guddiga doorashooyinka dadban ee heer Federaal.
Maxamed Cirro, oo ka soo jeeda gobolka Togdheer, oo aan lahayn khibrad ka baxsan warbaahinta, ayaan horaba looga fadhin hirgalinta doorasho xor ah oo loo dhan yahay, wuxuuna ugu horreeyay koox uu Fahad Yaasiin billawgii 2020-ka ku xareeyay guriga Habar Khadiijo.
Wuxuu noqday Gudoomiyaha Guddiga, isagoo garab ka helaya Madaxtooyada, hayeeshee, iyadoo laga duulayo heshiikii 27 May, mucaaradka ayaa Cirro ku daray 66 xubin oo ay cabsho ka qabeen, waxse lagama qaban oo mar kale ayuu guddiga ku soo laabtay, waxaana mar labaad loo doortay Gudoomiyaha Guddiga doorashooyinka dadban ee heer Federaal, FIET.
Cirro, wuxuu ka socdaa Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, kuwaas oo doonaya in ay boobaan doorashoonka dalka, kuma aysan xulan aqoon iyo akhlaaq toona ee waa hayin ay soo tababarteen, sida ay sheegayan dadka u dhuun duleela arrimaha doorashooyinka.
Midowga Musharixiinta, Wakiillada Beesha Caalamka iyo Bulshada Rayidka, ayaa si is dabada jog ah u soo saaray baaqo ku aaddan in doorashooyinka Golaha Shacabka aysan dhaafin dhamaadka bisha December ee foodda nagu soo heysa.